Aso Jehovah Adasefo Yɛ Sumase Kuw? | Nsɛm A Wɔtaa Bisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Altai America Mmum Kasa Amharic Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Australia Mmum Kasa Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Corsican Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungary Mmum Kasa Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Mmum Kasa Italian Italy Mmum Kasa Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russia Mmum Kasa Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Zapotec (Isthmus) Zulu
Oho, Jehovah Adasefo nnyɛ sumase kuw. Mbom no, yɛyɛ Christianfo a yɛbɔ mbɔdzen dɛ yebedzi Jesus Christ ne nhwɛdo ekyir, na yɛdze ne nkyerɛkyerɛ aabɔ hɛn bra.
Ebɛnadze nye sumase kuw?
Asɛmfua “sumase kuw” no kyerɛ ndzɛmba ahorow pii ma nyimpa ahorow pii. Naaso, susũ nsusũi ahorow ebien bi a nkorɔfo taa nya, nye siantsir a ɔmmfa hɛn ho no ho.
Binom susũ dɛ sumase kuw kyerɛ ɔsom bi a wɔaba fofor anaa wɔnngye nnto mu. Jehovah Adasefo mmfaa ɔsom fofor biara mbɔbɔɔ adze. Mbom no, ɔkwan a Christianfo a wodzi kan a wɔayɛ hɔn nhwɛdo nye nkyerɛkyerɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Bible mu no faa do somee no, dɛm kwan no ara na yɛfa do. Yedzi hɔn nhwɛdo no ekyir. (2 Timothy 3:​16, 17) Yɛgye dzi dɛ, sɛ ɔba no ɔsom ho nsɛm mu a, Nwoma Krɔnkrɔn no nkotsẽe na yebotum egyina do akyerɛ dza ɔsɛ dɛ yɛgye to mu.
Binom susũ dɛ sumase kuw yɛ nyamesom kuw bi a hɔnho yɛ hu na wɔwɔ nyimpa kwankyerɛfo. Jehovah Adasefo mmbu nyimpa biara dɛ ɔno nye hɔn kandzifo anaa kwankyerɛfo. Mbom no, yɛdze gyinapɛn yi a Jesus dze sii hɔ maa n’ekyirdzifo no yɛ edwuma: ‘ɔbaako nye hom Kwankyerɛfo, ɔnye Christ.’​—Matthew 23:10.
Jehovah Adasefo som no mmbɛn sumase kuw ho beebiara, mbom no hɔn som no dze mfaso brɛ no mufo no nye afofor a wɔwɔ mpɔtamu hɔ so. Dɛ nhwɛdo no, hɛn som edwuma no aboa nyimpa pii ma woedzi suban bɔn ahorow bi a wɔaka hɔn hɔ no do, ibi nye ndubɔn nom nye asabow. Nkyii so, wɔ wiadze mfɛndzanan nyina no, yɛkyerɛ akenkan nye akyerɛw, na iyi aboa nyimpa mpempem pii ma woesũa akenkan nye akyerɛw. Na yɛsan so boa wɔ atoyerɛnkyɛm ber mu. Yɛyɛ edwumadzen dze nya nkantando pa wɔ afofor do dɛ mbrɛ Jesus hyɛɛ n’ekyirdzifo no dɛ wɔnyɛ no ara pɛr.​—Matthew 5:​13-​16.
Fa mona Fa mona Aso Jehovah Adasefo Yɛ Sumase Kuw?